१२ वैशाख, नेपालगञ्ज । १५० वेड, २०३ कोरोना संक्रमित भर्ना । अधिकांश संक्रमितको अवस्था जटिल । जटिल संक्रमित भएर आउने विरामीहरुको संख्या पनि उत्तिकै छ । कोभिड–१९ संक्रमणको हटस्पट बनेको बाँकेको भरी अस्पतालको अवस्था यस्तै छ । सिमित संख्यामा रहेका […]
२३ कात्तिक, काठमाडौं । जो बाइडन अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपति बन्ने हुनु भएको छ्। डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार बाइडनले रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार तथा वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई हराउनु भएको हो । बीबीसीको अनुमान अनुसार महत्वपूर्ण मानिएको पेन्सिल्भेनिया राज्यमा वाइडनले […]
हिजोआज के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंहरू ? खासै देखिनुहुन्न त सडकमा ! हो, हिजो आज सडकमा निस्केको छैन । २०७६ चैतको पहिलो साता केही निजी कामले गोरखा गएको थिएँ । लकडाउनले झन्डै साढे चार महिना जति उतै थुनिएँ । बल गरेर […]
प्रकाण्ड प्रवक्ता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देश असाध्यै अशान्त, अस्थिर र अन्योलग्रस्त बन्दै गएको छ । तपाईंहरूले अहिलको परिस्थितिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? देश यतिखेर आफ्नो इतिहासमै पहिलोपटक महासङ्कटको भुमरीमा परेको छ । देशको जीवनमा सिर्जित यस अवस्थाका निम्ति […]
साउन १४, काठमाडौं । देश त एकदमै अस्थिर, अशान्त र अन्योलग्रस्त बन्दै गएको छ । तपाईंहरूले कसरी लिनुभएको छ ? ठीक हो, देश नयाँ सङ्कट र अन्तर्विरोधबाट गुज्रिरहेको छ । तर यो नहुनुपर्ने कुरा भएको होइन । राज्यको संरचना र […]
महासचिव कमरेड, २५ औँ जनयुद्ध दिवस आइपुग्यो । कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ? जनयुद्ध दिवस गौरवपूर्ण दिन हो । यसैमा एकीकृत जनक्रान्तिको विकास थपिएको छ । सिद्धान्तमा व्यवहार, विचारमा भावना र बलिदानमा विजय मिसिएको दिवसलाई नयाँ भावमा मनाउँदैछौँ । पार्टी प्रतिबन्धभित्रको […]
सामन्तवाद गयो, गणतन्त्र आयो, सङ्घीयता आयो, धर्मनिरपेक्षता आयो तर यी परिवर्तन श्रमिक जनताका लागि भएनन्, दलाल पुँजीपति वर्गका लागि भए । हामीले जनयुद्ध लडेको, क्रान्ति छेडेको त उत्पीडित वर्ग, समुदाय र देशको पूर्ण स्वाधीनताका लागि हो । एउटा लुटेराको सट्टा […]
कात्तिक ७,नेपालगंज । हाल नेपालमा कम्युनिष्टहरुको दुई तिहाई वलियो सरकार छ । यसले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा लगाउदै आएको छ । मानवअधिकार ,प्रेश स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिकहकहरुको पनि यो सरकारले चर्का नारा लगाउने गरेको […]
असाेज २०, बाँके । नेपालगञ्ज कारागारका जेलर भरतराज पाण्डेकै मिलिमतोमा कारागारभित्र लागु औषध कारोवार हुने गरेको तथ्य बाहिर ल्याएको भन्दै बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भरत बम ‘रणवीर’ माथि असोज १० गते राति नेपालगंज कारागर भित्र हातपात भयो । […]